Tag: fiaraha-mitantana ho an'ny torolàlana momba ny doka tsaratsara kokoa | Martech Zone
Tag: fiaraha-mitantana ho an'ny torolàlana momba ny doka tsara kokoa
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny fanarenana doka
Zoma, Jona 16, 2017 Alakamisy, Jona 22, 2017 Gal Glikman
Iray amin'ireo fanamby lehibe indrindra ho an'ny mpanonta sy ny mpivarotra ankehitriny ny fanakanana doka. Ho an'ny mpivarotra, ny fiakaran'ny tahan'ny fanakanana doka dia miteraka tsy fahatratrarana ny mpihaino adblocking maniry. Ho fanampin'izany, ny tahan'ny fanakanana doka avo lenta dia mitarika amin'ny fananganana doka kely kokoa, izay mety hampiakatra ny tahan'ny CPM amin'ny farany. Hatramin'ny nahatongavan'ireo mpanakan-doka folo taona lasa izay, nisondrotra ny tahan'ny adblocking, nahazo mpampiasa an-tapitrisany ary niparitaka tamin'ny sehatra rehetra. Iray amin'ireo fikarohana farany